Madaxweynaha HirShabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ku dhowaaqay inuu is-casilay | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxweynaha HirShabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ku dhowaaqay inuu is-casilay
Madaxweynaha HirShabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ku dhowaaqay inuu is-casilay, isaga oo sheegay inuu saluugsan yahay qaabka loo wado dhismaha maamulka cusub ee HirShabeelle.
Warqadda is-casilaadda, oo lasoo garasiiyey warbaahinta, ayuu Waare ku sheegay in dhismaha maamulka cusub ee HirShabeelle lagu wado si deg deg ah, taasi oo keeni karta xasilooni darro siyaasadeed.
Waxa uu tusaale usoo qaatay in markii koowaad ee maamulkan la dhisayey oo ahayd 2016 la aas-aasay xilli dalka ku guda jiro doorasho federal, taasi oo keentay in xildhibaano aan tayo lahayn iyo maamul fadhiid ah, oo ay beelo badan cabasho ka qabaan lasoo dhiso.
Waxa uu sheegay in hadda lagu socdo waddadii oo kale, islamarkaana uu soo jeediyey in dib loo dhigo soo xulista xildhibaanada HirShabeelle illaa bil kadib doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, balse taasi ay diideen hoggaanka HirShabeelle, odayaasha dhaqanka, dowladda federaalka iyo xildhibaanada metela HirShabeelle ee federaalka.
Waare ayaa sidoo kale nasiib-darro ku tilmaamay in mucaaradka dowladda federaalka oo badankood kasoo jeeda HirShabeelle ay ka aamuseen waxa ka socda HirShabeelle, halka ay ka dhiidhin jireen dhibaatooyinka maamul goboleedyada kale.
Waxa uu warqaddiisa ku yiri in isaga oo eegaya dhammaan arrimahaas uu go’aansaday inuu is-casilo.
Previous articleShacabka ku nool Mareykanka oo maanta u dareeraraya goobaha cod-bixinta
Next articleWorld reacts with anger, solidarity after Vienna shootings
Madaxweyne Farmaajo oo ka Gudoomay Warqada Aqoonsiga Safiirka Soomalaiya u fadhi...
Madaxweynahii Hore Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo gaaray magaalada Jowhar